Oromiyaa.gov.et - Power and Duties
Aangoo fi Gahee Hojii Inistitiyutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa
1) Imaammataa fi tarsiimoo qorannoo qonnaa naannichaa baasuu; tartiba qorannoo murteessu; sagantaa fi kaaroora hojii qophessuu, yemmuu mootummaan mirkanaawan hojii irra olchuu fi hordofuu.
2) Feedhii misooma Naannicha walin kan walsimu sagantaa qorannoo qonnaa fi piroojeektoota qopheessuuf qajeelfama gargaaruu qopheessuu hojii irra olchuu.
3) Qaamoolee adda addaa jechunis Giddugaleessoota Qorannoo Qonnaa Feedaraalaa fi Univarsitoota keessatti hojii qorannoo qonnaa geggaffaman ilaalchisee qindomina akka jiraatuuf jecha gabaasa isaan godhan walitti qabee Mootummaaf ni dhiyeessaa.
4) Akkaataa immaammataa fi tarsiimoo qorannoo fi misooma qonnaa Naannichaatti hojii qorannoo qonnaa gaggeessuu ykn akka gaggeeffamuu gochuu.
5) Qaama dhimmi ilaaluu wajjin ta’uudhaan bu’aan isaanii kan mirkanaa’e firii qorannoo qonnaa qaamni itti fayyadamu akka beekuu fi hojii irra akka olchuu kan gargaaruu qajeelfama baasuu, hojii irra olchuu fi hordofii gochuu.
6) Imaammataa fi tarsiimoo qorannoo qonnaa naannicha bu’ura gochuudhaan giddu-galeessootni jiran akka dachaan ykn cufaman ykn itti fufan akka sumas haaraan akka banaman yaada murtee Mootumaaf dhiyeessuu, murtee kennamee hojii irra olchuu.
7) Qaama dhimmi ilaaluu waliin tahuudhaan beekumsi uummataa kan mala qonnaa akka baballatuu taasisuu firii qorannoo irra argamuu beeksisuu.
8) Biyya keessaa fi biyya alatti kan gaggeeffaman qorannoo qonnaa fi firii qorannoo ilaalchisee ragaalee hunda walitti qabuudhaan kuusuu fi raabsuu, sirna ragaalee walitti dabarsuu ijaaruu fi gaggeessuu.
9) Qaama dhimmi ilaaluu walin tahuudhaan Naannicha keessatti qorannoo qonnaa, mala qonnaa fi barnoota qonnaa gidduu waldeggarsi hojii akka jiraatuu haala mijeessuu.
10)Qorannoo qonnaa irratti kan boba’uu humna namaa gahuumsaan fi
11)Qorannoo qonnaa Naannichaa keessatti namoota ykn dhaabbatoota bu’aa
ykn firii ol’aanaa galmeessisaniif sirna badhaasni itti kennamuu diriisuu.
12)Hojjeetoota Inistitiiyutichaaf haala hojii mijaawaa uumuu, qoratootaaf ogummaa fi bu’aa isaan buusan irratti hundaa’ee sadarkaa guddinaa dirirsuu fi fooyyessuu, oggaa mirkana’e hojii irraa olchuu.
13)Waldoota ogummaa qonnaa jajjabeeissuu, qorannoo qonnaatiif ragaalee
barbaachisan waljijjiruudhaan akka bu’aa buusan haala mijeessuu.
14) Dhaabbilee qorannoo kan mootummaa Fedaraalaa fu Naannolee akkasumas
qaama garbiroo kaayyoo walfakaataa qaban waliin qunamtii uumuu,
deegarsa gochuu, waliigaltee mallateessuu fi hojii irra olchuu, hojii irra oluu
isaani hordoffii gochuu.
15)Sagantaalee qorannoo Giddugaleessoota Naannichaa fi kan federaalaa
keessatti gaggeeffaman gidduu hojiiwwan walfakkaataa qaban waliin
qunamtii uumuu, deegarsa gochuu, waliigaltee mallatteessuu fi hojii irra
oolchuu, hojii irra oluu isaanii hordoffii gochuu.
16) Naannicha keessatti hojii qorannoo qonnaa irratti kan bobba’ee jiru ykn kan
bobba’u nama kammiifiyuu hayyama kennuu, galmeessuu, raga qabachuu fi
17) Abbaa qabeenyaa ta’uu waliigaltee gochuu, himachuu ykn himatamuu.
18) Hojiiwwan hojjataman qaama dhimmi ilaaluuf gabaasuu.
19) Kaayyoowwan isaa bakkaan ga’uuf hojiiwwan biro raawwachuu.